Kala duwan Portfolio iyo baaska - Blockchain News
Haddii Maal ah ayaa si adag u go'aansaday on sida ay u doonayaan in ay maal-cryptocurrencies iyo dersayay spectrum oo dhan lacagta qadaadiicda oo xiiso leh, waa waqti aad kaga fikirto oo ku saabsan qaab dhismeedka faylalka tacliimeed ee maal-gashiga mustaqbalka.
faylalka maalgashiga waa a collection of hantida crypto ururiyay si loo gaaro hal gool qaab faa'iido. Waxa ugu waa, dhaqanka suuqa mararka dhigaya xaaladaha sida, taas oo ilaalinta hantida jira horeba waa guul weyn. Sidaa darteed, marka la xirrira hawleed, waxaa lagama maarmaan ah in ay bixiyaan ma aha oo kaliya in ay awood u of qadaadiic gaar ah fiiro, laakiin sidoo kale jidadka ku muteystay in dalabyo suuqa crypto. Oo, Dabcan, wax la soo dhaafay waa inaan sameeyo waxaa la dhigay lacag dhan mid ka mid qadaadiic hal rajada ah in waxa aad taajir ah crypto ka dhigi doonaa.
Fast iyo yaab vs. Long iyo Easy
Conventionally, xeelado maalgashiga loo qaybin karaa laba qaybood. maalgelinta muddada dheer la doortay by maal-muxaafidka ah, kuwaas oo diyaar u ah inay allabari faa'iido deg deg ah (saraaxad hadlaya, waxaan jeclahay suuqa crypto, waayo,). More ka qaybgalayaasha suuqa khamaarka ku tiirsan ganacsiga muddo gaaban dagaal, dakhliga hillaac-soomi rajo oo ay la socdaan halis sare oo laga badiyay walba hal mar.
faylalka maalgelinta waxaa la abuuri karaa iyada oo ku saleysan oo ka mid ah laba xeeladaha, qaybinaya soo diyaariyeen oo dhan cryptocurrencies galay kuwa muddada dheer iyo muddada-gaaban. Waxaa haboon in la xasuusnaado, si kastaba ha ahaatee, in haddii muddo dheer ku haysa, qadaadiicda lagu kalsoonaan karo si fudud laga iibsan karaa oo sugayay soo baxay ay qiimo in ay jebiyaan diiwaanka, ka dibna waxaa maal-gaaban, kiis kasta, waxaa lagama maarmaan noqon doonaan in ay quusin galay asaaska ganacsi, bartaan xeerarka iyo dhaqanka ee suuqa, asaaska falanqaynta farsamo, iyo hagar la'aan socdo background news suuqa crypto ah.
Ha sidoo kale ma waayi arkaan xaqiiqada ah in xitaa tusa darradaas la isku halayn karo u dhaqmi karaan si aan habooneyn iyo jir- quusin galay moolkeeda qiimaha. Dadka iibsaday Seeraar waayo, $19,000 Dhawa haatan waxaa maalgashi la isku halayn karo ka fiirsan. Suuqa waa suuqa, iyo maalgelinta mudada dheer u baahan samir Spartan iyo habdhiska la taaban karo ka sii xoojiyeen. In aan la lumin saaxiga iyo in aan la iibin hantida ka heli kartaa qiimaha ugu yar waa hawsha ugu muhiimsan ee Maal-ah oo uu soo galay suuqa ugu mudada dheer.
Inta u dhaxaysa Madaxkutidu iyo Bulls
Mid ka mid ah siyaabaha ugu maqlana of kala duwan khataraha waa in ay qaataan meel u dhaxaysa dibi iyo orso, qaybinaya hantida sidan oo kale in uu leeyahay wax la sameeyo iyada oo labada fiican iyo isbeddellada bearish a. Waxaa jira halis sare oo gundhin u dhexeeya mid ka iyo kuwa kale sababtoo ah in aad go'aan ka gaarto haddii aad rabto in aad ku biiri smart ama qurux ah. Intaa waxaa dheer, dad yar maamuli in ay beddelaan maskaxda ku dhex filayo ifbaxa iyo dayrta ee hanti ah crypto. Sida caadiga ah, isagoo jacayl ula dhacday hanti, Waxaan doonayaa in aan aaminsanahay in dhibaatooyinka oo dhan ay yihiin kuwo ku meel gaar ah, garaafyada ee wax qarinaysid, iyo qadaadiic ah oo ku saabsan inay qarxaan shumac kor waa.
dheelitir la'aanta waxa uu noqon doonaa ku haboon maal qabow dilaa ah oo muddo dheer ay iimaanka lumay ee mucjisooyinka, si cad u fahmaan calaamadaha suuqa, oo ay awoodaan in la saadaaliyo dhaqanka ee labada dibigii iyo ololeeya orso.
No Ceeb in Qishka
awoodaan si looga fogaado in khaladaad badan oo aad noqon doonto haddii ka hor maal aad ka baran-aragnimo ah ee kuwa ay muddo dheer suuqa. Nasiib wanaag, waxaa jira wax badan oo ka mid ah khayraadka u furan, halkaas oo maal-daabacaan macluumaad ku saabsan xilal ay crypto maalin kasta. Raadi blog ama telegraam channel, taas oo aad ka heli badan oo xiiso leh. Mushaharka in xasiloonida ee faylalka dareenka, shuruudaha by taas oo lacagta birta ah waxaa lagu daray in ay, iyo dhaqanka Maal ee case of fadhiidka ah ee suuqa. Foomka aad faylalka isu ekaysiinta la faylalka tacliimeed iyo, haddii loo baahdo, raac talooyinka Maal ee ku saabsan iibka ah ee hantida cusub.
Habka labaad ma ku lug jeestay on maskaxda waxaa ka Faydno waxa soo socda talooyinka dilaaliinta. Si aad u taariikhda, waxaa jira dhowr tobanaan Axe crypto, taas oo in hab maalin walba siin digniinta si gato ama la iibsado hanti gaar ah crypto, muujinaysa tiro ka mid ah faylalka tacliimeed guud, soo socda taas oo yaraynaysa khatarta. Su'aasha kale waxay tahay in ay tahay oo aan la garaneyn waxa shahaadooyin ganacsatada ka dambeeya codsiyada dhab ayaa, ninna idinku ka in uu ku lug bambooyin mass iyo bulaacadahooda ilaalin doona, oo haddii ay dhacdo of failure a, aad eedayn karaa oo kaliya codsiga on your phone.
Ku soo noqoshada fursadaha dakhliga, taas oo suuqa crypto waxay siisaa, mid ka mid ah fursadaha ugu haboon ee baaska ayaa faylalka tacliimeed waa qaybinta hantida by alaabtii maalgashi. Tani waa sida xirfadle lacag maalgashi shaqada.
Noocan ah faylalka tacliimeed eegto laga yaabaa in wax sidan oo kale:
25% lacagta birta taasoo keentay maalgashiga muddo-dheer (BTC, Citaah, XRP);
25% ganacsi muddada-dhexe ee altcoins top;
10% heshiisiin robotized;
10% aalado ganacsiga iyo ganacsi algorithmic;
10% Ganacsi on wararka (raad Gainers iyo Khasaaray);
10% maalgelinta ICOs rajo;
10% hantida crypto khatarta sare leh.
Boqolkiiba saamiyada ee faylalka noocan oo kale ah waxay ku xirnaan doontaa sida fiican u yaqaanna aad ku sugan tahay istaraatijiyad maal gaar ah iyo sida ay ku habboon tahay xaaladda maanta suuqa crypto.
faylalka A crypto la abuuri karaa oo ku salaysan gobollada maalgashiga sida ajandaha maalinle ah labiska marka la eego xeerka sharciga ah ee cryptocurrency ee dunida si weyn u saamayn ku yeelan karaan heerka ugu. Waxaad u aamini karaa qayb ka mid ah faylalka tacliimeed ee maamulaha fund ah, si kastaba ha ahaatee, kiiskan, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso boqolkiiba faa'iidada helay.
Si kastaba ha ahaatee, mar la aasaasay, faylalka crypto ma kuu adeegaynaa nolosha oo dhan. Waxay u baahan doontaa in dib loo eego oo “gariirin” isbedel suuqa, iyadoo muuqaalka kore ee lacagta birta ah oo cusub oo rajo iyo xasillooni, iyo, ugu dambeyntii, la fadhiidka ah ee suuqa, Goortii makhribkii hantida crypto ugu kalsoon keeni jecel yihiin inay ku iibiso wax walba oo tuurid lacag Fiat ilaa Hase yeshee ah.
arrimaha maxkamadda Ruush ...
Cour Shiinaha ayaa ugu sarreeya ...
Post Previous:Colors United ee Benetton ka bilowdey aqbalayaan cryptocurrency in Lithuania
Post Next:South Korea ayaa la sheegay in jaangooyaha amarada 12 weydaarsiga cryptocurrency in dib loo eego heshiiska macaamiisha
MichaelSwivy ayaa sheegay in:
nop ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 15, 2018 at 3:54 AM
roblin ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 28, 2018 at 12:40 PM
Riga ayaa sheegay in: